एसपीले पैसा लिएर काठ तस्कर भगाएको पुष्टि, निलम्बनको तयारी ! – Purba Aawaj
एसपीले पैसा लिएर काठ तस्कर भगाएको पुष्टि, निलम्बनको तयारी !
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ समय: २२:३६:२९
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका एक एसपीले आर्थिक चलखेलका आधारमा काठ त’स्करलाई प’क्राउ गरेर छाडेको खुलेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका तत्कालिन एसपी ओमबहादुर रानाले त’स्कर छाडेको खुलेको हो ।
उनीमाथि का’रबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।प्रदेश प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले गठन गरेको छानबिन समितिले यसमा एसपी रानाकै मिलेमतो रहेको औंल्याएको हो । प्रदेश कार्यालयका एसपी राजेन्द्रसिंह खड्का नेतृत्वको छा’नबिन समितिले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गत मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएका छ ।
गत बैशाखमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको घुमुवा प्रहरी टोलीले डुडुवा– ६ हिलमिनियाबाट सालको काठसहित निसार खाँलाई प’क्रा’उ गरेको थियो । प’क्रा’उ परेपछि उनी ह’त्कडीसहित भागेको भनेर माथिल्लो निकायलाई खबर गरिएको थियो । तर, प्रहरीले ब’रा’मद गरेको उनको मोटरसायकल तथा मोबाइल पनि फिर्ता भएपछि घ’ट’ना शं’का’स्पद बनेको थियो ।
प्रहरीले भगाएको सूचनाका आधार प्रदेश प्रहरीले समिति नै बनाएर छानबिन थालेको थियो । जसमा एसपीकै मिलेमतोमा खाँ भागेको देखिएको हो । ‘प’क्रा’उ परेका व्यक्ति भाग्न सक्ने भए तर, मोटरसाइकल र मोबाइल समेत फिर्ता हुुनले मिलेमतो देखियो’ छानबिन सं’लग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने,‘यसमा एसपीकै मिलेमतो प्रष्ट देखिएको छ, प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं, हेरौं का’रबाही के हुन्छ
प्रतिवेदनमा यसमा आर्थिक चलखेलको आ’शं’का गरिएको छ ।त्यसरी काठ ब’रा’म’द गरी प’क्रा’उमा सं’ल’ग्न प्रहरीसँग पनि छानबिन समितिले सोधपुछ गरेको थियो । जसमा सुरुमा उनीहरुले खाँ भागेको बताएपनि पछि एसपीकै आदेशम छाडेको बताएका थिए ।खाँ हत्कडी नै लिएर भागेमा पछि ह’त्कडी भने फिर्ता गरेका थिए ।
‘हत्कडी फिर्ता गरेपछि प्रहरीले पनि उनको मोटरसाइकल र मोबाइल फिर्ता गरेको देखियो,’ छानबिन समिति स्रोतले बतायो ।एसपी रानाको काठमाडौं सरुवा भइसकेपछि यस विषयमा छा’नबिन सुरु भएको थियो । हाल प्रदेको छानबिन प्रतिवेदनमाथि प्रहरीको उ’जुरी छानबिन शाखाले का’रबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
एसपीमाथि का’रबाही टुंगिएपछि त्यसमा सं’लग्न अन्य प्रहरीमाथि का’रबाही गर्ने प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तयारी छ ।एसपी राना यसअघि पनि पटक–पटक का’रबाहीमा परेका अधिकृत हुन् । रसुवामा जिल्ला प्रमुखका रुपमा काम गर्दा रक्तचन्दन त’स्करीमा मिलेमतो देखिएपछि उनमाथि विभागीय का’रबाही भएको थियो ।
सोही घ’ट’नामा से’नाका कर्णेल बर्खास्त हुँदा उनलाई भने राजनीतिक पहुँचको आधारमा सामान्य का’रबाही गरेर जोगाइएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । वि’वादास्पद पृष्ठभुमी भएपनि दबाबकै भरमा कास्की, बाँके जस्ता जिल्लाको इन्चार्ज दिइएको थियो ।पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरालाई आर्थिक प्रभावमा पारेर उनले यसरी महत्वपूर्ण जिल्लाको इन्चार्ज पाएका हुन् ।
बाँकेमा उनले एक करोड भन्दा धेरै कमाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । अहिले पनि का’र’बाहीबाट जोगिन उनले राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब दिन थालिसकेको स्रोत बताउँछ । प्रहरी सं’गठनलाई नै ब’दनाम गराउने रानामाथि यसपटक प्रहरी महानिरीक्षकले कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् उनको पनि परीक्षाको विषय छ ।दृष्टि
Last Updated on: August 16th, 2021 at 10:36 pm
५८९ पटक हेरिएको